Iingcebiso zoCwangciso lwe-Fuel ongayisebenzisa kwiRide Your Next
Kuyinto elula kakhulu kunokuba ucinga ukuphuma kwegesi kwisithuthuthu; Ndikholelwe, kwenzeke kum maxesha amaninzi kunokuba ndiyakhathalela ukuvuma. Kodwa kuzo zonke izihlandlo zendlela yokuxhalabisa, ndingaxela ukuba ezininzi zezo zihlandlo zazikhuseleka- nangona xa ndikhwele amabanga amade ngamabhayisikili ngamathangi amancinci.
Nazi izicwangciso ezimbalwa malunga nendlela yokuphepha ukuhlaselwa kwe-buzzkill yokukhangela ngenxa yokuba isithuthuthu sakho sagxothwe ngegesi.
Ungayithembi Iimpawu Zakho
Njengokuba iteknoloji ye -board iye yaphucuka kwiminyaka embalwa edlulileyo, ayifanelekanga ngokupheleleyo; Ngethuba elingaphaya kwelinye icala lokukhwela ibhasikiya yanamhlanje ukusuka kumvelisi omkhulu onesistim esinobuchule obubonisa uluhlu oluqikelelweyo, ndine-sputter ye-motorcycle ndafa nje ngeekhilomitha ezimbalwa ngaphambi kokuba kuthethe. Ngona kuncinci kunokuba idijithali "ibanga elingenalutho" kubonisa iimpawu ze-analog-kwaye zingacacanga ngakumbi kunezo zibane izilumkiso ezikhanyisa xa uphantsi kwepetroli. Ukuba kukho into enokuyifunda kuyo yonke le teknoloji, yilokho uhambo lweekhomputha zikhona ukuba zinikeze i-rough-not guiding guide of how much we can out from tank nganye.
Xa ekungathandabuzeki, Refuel
Ngokukodwa xa uhamba ngeendlela ongaqhelekanga ngazo, ngumthetho omhle wesityhuse ukuba ungayichukumisi inhlanhla yakho. Izitulo zeGesi zifumaneke malunga nekona nganye kwisixeko esikhulu, kodwa njengoko ufika emaphethelweni, ziba nzima kakhulu; nangona unesitya esiliqingatha sepetroli eseleyo kodwa ucinge ukuba ungeke uhlangabezane nesinye isiteshi segesi, uthathe imizuzu engaphezulu emihlanu ukukhupha kwibhayisikili yakho.
Uninzi lweendlela zokuhamba ziyakwazi ukufumana isiteshini segesi esiseduze, kwaye ezinye zinezixhobo zokucwangcisa umbane ezinokuthi zihlele izikhululo ngexabiso kunye / okanye umgama; Ukuba ukhwela nge-GPS, qhelana nempawu zayo uze usebenzise kuzo.
Pake i-Siphon, okanye Yilungile, Gcina i-Fuel yakho eyongezelelweyo
Ukuba ugibela kwiindawo ezisemaphandleni apho izitishi zegesi zimbalwa kwaye ziphakathi, unokucinga ukuba uthwala i-siphon xa unamathela kwaye ufuna ukutsala umbane ukusuka kwelinye umgibeli.
Uninzi lwabahamba ngee-motorcyclists ezide ukuya kwelinye inyathelo elingaphambili ngokuthatha i-fuel back in jerry okanye i-jug plastic; akudingeki ukuba uthethe, kuya kufuneka uqikelele xa uhamba ngeoli. Nenyameko ngalao mijelo!
Phinda uphinde ufake iTanki eNgakumbi
Ukuba uneminqweno ende kude kodwa ungenayo ibhayisiki yokutyelela , jonga kwi-postmarket phambi kokuba uthengise. Kukho iinkampani ezininzi ezinokuthi zivelise amathangi aphezulu; ukuphanda iinketho zakho kwaye ufumane ukuba unokuphinda uphumelele ukuhamba kwakho nge-tank enkulu.
Oko Ukwenza Ukuba Uphuma kwiGesi
Ezinye izithuthuthu zixhotywe ngamagatya e-petcock, okukuvumela ukuba utshintshe kwindawo egcinwe kuyo itanki yakho yamanzi ngeekhilomitha ezimbalwa ezongezelelweyo. Ngokuqhelekileyo zikhona kwicala lesobunxele lebhayisiki engezantsi kwitanki (ngoko isandla sakho sokunene sinokuhlala kwi-throttle.) Ukuba i-bike yakho ine-valcock valve, ingumzekelo omuhle ukuziqhelanisa nezikhundla zayo ngaphambi kwexesha ukuze unokutshintsha ngokukhawuleza ukugcina ukuba injini yakho iqala ukutshiza.
Ukuba awunayo i-valcock valve kwaye uphuma gesi, kufuneka usebenze ngokukhawuleza. Injongo yakho ngokukhawuleza kukufikelela emagxeni okanye kwi-median-nantoni na ekufutshane. Sebenzisa umqondiso wakho wokujika kunye nengalo yakho ukubonisa ukuba utshintshana imizila.
Iindwendwe ezijikelezayo zingenako ukukulindela isidingo sakho esiphuthumayo sokuphuma emgwaqweni omkhulu. Ukuba awuyi kuthatha inyathelo xa ibhayisikili yakho ibonisa iimpawu zokufa kwendlala, uya kubanjwa phakathi komgwaqo-imeko eyingozi kakhulu ukuzifumana.
Emva kokuba usuphumelele ngokukhawuleza ukuyeka ukuya kwicala lendlela, sebenzisa izibane zakho zengozi, uhambe kude nebhayisikili yakho, kwaye uhlale kude kude neendlela njengoko usebenzisa ifowuni yakho kwinkonzo yendlela okanye uphawu lokunceda.
Ukuba unquma ukushiya ibhayisikili yakho kwaye uhambe uye kwisikhululo segesi, cela isitsha segesi oza kuzalisa uze usibuyisele kwisithuthuthu sakho. Ukuba isitishi asithengisi amathangi okufuya, athenge ibhotile yamanzi uze uyidle. Ngeke ufune ukuvumela utywala lwamanzi kwindawo yakho yokunikezela ngamanzi, ngoko susela ibhotile engenanto phambi kokuba uzalise; Ngaloo ndlela, unako ukuqinisekisa ukuba akukho gesi ebuyela kwisitanki sakho.
Yiyiphi iComplication in English Grammar?
IHanover College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Iimpazamo eziphezulu ezi-10 zaseburhulumenteni zesiTaliyane
Ngokwenza ngokulinganisela Ukuvuselela umfanekiso: Ukudala iiGraphic Graphics